Xaqa cayimaadda maalinta doorashada & Xaqa muddo-kordhinta Madaxtooyada
You are here: Home Home Xaqa cayimaadda maalinta doorashada & Xaqa muddo-kordhinta Madaxtooyada
Laba dhawaaq ayaa baxaya: Dhawaaqa 1aad ee saxa ah oo dadka intiisa badani ku hadaaqayaan oo ah "Maalinta Komishanku qabtay ama cayimay waxba lagu kordhin maayo ama lagu dari maayaba." Iyo dhawaaqa 2aad oo ah kan doorasho-diidka adeegsanaya weji-ku-macaashka wareersan ee dalqada indhaha ku leh.
Go’aammada 'fayriska' ah,
Heshiisyada ganacsiga ah,
Allow Guurtida ka hay,
Raggii garashada lahaa,
Wed baa gaaggaabiyee,
Gafaneyaal haw beddelin,
Allow laba geeriyood,
Golaha haysugu xigsiin,"
Maansada Gufaaco ee Guuleed Yuusuf Axmed, 9/5/2015ka, Hargeysa,
(Meydhaanka awoodaha Komishanka: Xeeladaha doorasho-diidka)
Dhawaaqa 1aad waa kii Komishanku faafiyay ee ahaa doorashadu waxay qabsoomi kartaa 1/6/2016ka oo ay ku raaceen saddexdii Xisbi qaran, bulshadii rayidka ahayd oo ay SONSAF masilaysay, dadweynihii iyo beeshii caalamkuba.
Dhawaaqa 2aad waa mid mugdi ku jira oo jaho-wareersan. Timacadde ayaa laga hayaa: "Dhullaxii aan sheeg-sheegi jiray, dhuuxa ka caddaa." Dhawaaqan dhalanteedka ahi wuxu tebinayaa war ah: Dawladda ha loo kordhiyo ama/iyo Xukuumadda ha loo kordhiyo. Mar waxay ku odhanayaan Xukuumaddu horumar ayay samaysay ee laba sannadood ha loo kordhiyo markaasaad la yaabaysaa iyada oo guulo sheeganaysa waxay u geli la'dahay doorashada ee ay uga baqanayso ama dhuumashada dhabarku muuqdo ugu jirto.
Hadda Dastuurku mararka uu ka hadlayo muddo-kordhinta wuxu ka hadlayaa Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka. Waa Qodobka 83aad, Faqraddiisa 5aad. Muddo-kordhinta kale waa ta Golaha Wakiillada, waxaana ka hadlaya Qodobka 42aad, Faqraddiisa 3aad. Dastuurku sir iyo caad midna ugama hadlayo Xukuumad ama Dawlad loo kordhiyo. Gaaraayucuunta kale ee malafsiga dheecaanka wadhatada ku mamay iyaga iska daa.
Madaxeynihii waa nool yahay. Madaxweyne-ku-xigeenkiina waa nool yahay. Labaduba xafiiskii ayay hayaan oo waa ay shaqaynayaan. Midkoodna lagama maqal ha naloo kordhiyo. Weliba Madaxweynuhu intaas oo jeer ayuu fagaare maqal iyo muuqaalba ku sheegay in aanu diyaar u ahayn in daqiiqad loogu daro. Komishanka wuu ka oggolaaday maalinta ay doorashada u qabteen.
Is-weydiinta 1aad ee 'Miliniumku' waxay tahay: YAA LOO KORDHNAYAA?
Si aynu Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka muddo-kordhin ugu samaynno, waxaynu ku qasban nahay in aynu ka maqalno in ay sidaas doonayaan iyo sababaha ay u doonayaan, isla markaana ay dhawaaqaas ama codsigaas gaadhsiiyaan Golaha Guurtida oo mas'uuliyaddaas iska leh. Taasi, ma ay dhicin, ma aynu maqal isla markaana saansaankeedii ma muuqdo.
Is-weydiinta 2aad ee 'Miliniumku', waxay tahay, yaa haddaba doonaya, dabada ka wada ama u ololeynaya muddo-kordhintan dal iyo dadba wareerisay? Waxa muuqda oo aan qofna ka qarsoonayn in uu socdo olole xooggan oo habaysan oo meelo badan ka socda oo lagu doonayo muddo-kordhin aanay dalban oo aanay codsan mas'uuliintii ay ahayd in ay dalbadaan.
Komishanka Doorashooyinka wuxu cayimay maalinta ay qabsoomi karaan doorashooyinka Madaxtooyada iyo Golaha Wakiilladu. Daneeyayaashii dhammaantood waa ay isku raaceen iyada oo uu Madaxweynuhuna qoraal rasmiya sidaa Golaha Guurtida ugu qoray.
Shir-guddoonka Golaha Guurtida ayaa Golahaa ka saaray Guddi 29 xubnood ah oo ay ku jiraan Shir-guddoonka iyo Xoghayaha Guud ee Golahaasi. Tiradani, aad ayay u badan tahay marka la eego Golaha Guurtida oo 82 ah. Weliba haddii laga tegi waayo, Goluhu haddii uu fadhiisto, tiradani ma buuxsamayso, sidaas ayay xubnaha soo xaadiraa aanay aad uga badnaanayn Guddida sida xeeladaysan loo saaray ee go'aamin doonta aragtida Golaha Guurtida.
Mar haddii daneeyayaashii oo dhami - gude iyo dibadba - isku raaceen maalinta doorashadu qabsoomayso, dawgu ma ahayn in ay Guurtidu Guddi u saarto mar haddii aan waxbaba la isku diiddanayn.
Wargeysyada qaarkood waxay qoreen 7dii bishan Meey, in Guddi-hoosaadka Golaha Guurtidu ay sacab kaga dayaamiyeen markii Xisbiga Kulmiye oo ay la kulmeen u sheegay in ay muddada kordhin karaan oo waqtiga ay la noqoto ay qaban karaan. Wargeys ayaan sidaa ka akhristay. Hoggaankii Kulmiye markii ay shirkaa ka soo baxeen, waxay saxaafadda si cad oo badheedh ah ugu sheegeen in ay Guddi-hoosaadka Guurtida ku yidhaahdeen xilliga ay idin la noqoto doorashada u cayima.
Arrintaasi, waa meydhaan xeerarkii dastuuriga ahaa ee inoo yaallay ah. Waa marin-habaabin ra'yiga iyo aragtida dadweynaha. Waa tallaabo taban oo dadweynaha si qaldan loogu sheegayo in Golaha Guurtidi Dastuur ahaan xaq u leeyahay in uu maalinta doorashada cayimo. Taasina waa been cad oo aan geedna loogu soo gabban. Xisbiga Kulmiye ma ay ahayn in uu hadimooyinkii hore hantaaqooyin dambe ugu daro ummaddan tabaalaysan.
Xukuumaddaa fadhiidka ah ee aan wax ay yeesho mooyiye waxba u tarin ummadda ee muddo-kordhinta suuqa madow ah dalbanaysa ayuu Xisbiga Kulmiye dadka u qariyay oo sidii jaadkii cawslaha ahaa u muuseeyay. Muuseyntuna waa ay badan tahay. Taas, ayuu haddana maanta leeyahay ha loo kordhiyo. Subxaan! Oo yaa loo kordhinayaa. Ma Madaxweynahan nool ee caafimaadka qaba sidii uu noo sheegay ayay wakiil ka yihiin? Yaa dirtay dee? Nimanku, miyaanay Ilaahay ha yaabayn oo aanay aakhiradooda u tudhanayn. Waxaanu leenahay habaar dibadda weeyaan, ummadduna dib dambe idiin aammini meyso xilna idiin ku dhiiban meyso. Xaalku waa baabbacadaa timo ka eeg.
Sidii Ibraahin-gadhle u yidhi ayay maanta taagan tahay oo, waa kii lahaa:
"Nin i dagay markii hore,
Oo i dilay markii xigay,
In aan kaga dambeeyay,
Dooddani i faraysaa,"